musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » nhandare yendege » Ongorora Kunakidzwa kweFrankfurt Airport
Airlines • nhandare yendege • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • Germany Kuputsa Nhau • nhau • Kuvakazve • Kutarisirwa • ushanyi • kutakura • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau • Akasiyana Nhau
New Fraport Visitor Center kuvhura musi waAugust 2, Vashanyi 'Terrace neAirport Tours izvozvi zviri kushanda zvakare.
Nyowani multimedia Visitor Center iyo ichavhura munguva pfupi iri muCompourse C yeCheminal 1.
Nzendo dzakakurumbira dzendege dzichazotangazve kutanga kwaNyamavhuvhu.
"Mahwindo akachenjera" anoshandisa chaiyo chaiyo kuti awedzere iyo apuroni panorama ine chaiyo-nguva data pane yakamira ndege.
Frankfurt Airport iri kuwana chimwe chinokwezva: itsva multimedia Visitor Center iyo ichavhura munguva pfupi iri muCompourse C yeCotinal 1. Iyi nyowani nyowani inoisa nyika inonakidza yendege hombe yeGerman pane zvigunwe zvevashanyi. Ndiwo mukana wevateveri venhandare yemazera ese kuti vaongorore bhizinesi rezve ndege nenjere dzavo dzese. Ko zvakadii nekutsvedza muchikamu cheye marshaller uye kutungamira jet munzvimbo yayo yekupaka? Unogona kuzviita pano! Kana kukuvadza kuburikidza nematanho anotenderera eairport's otomatiki mukwende wekutakura system? Ingoisa pairi chaiyo chaiyo headset uye tanga inonakidza Motion Ride! Chiratidziro chepakati, Iyo Globe, zvakare inoita kuti iwe utambe mutambo wepasirese kubhururuka mukuita - uye dzidza nezve rakakosha basa rinoitwa neFrankfurt Airport mairi.
Nzira inopfuura neratidziro iyi inosvika chiuru mazana maviri emamirimita inoratidzirwa nekupenya kwemavara epamusoro ayo anonyatsoenderana nenzira dzinoshandiswa nendege hombe kusimuka nekumhara. Pakutanga chaipo, 1,200-mita-mita mita yeAirport City (pachiyero che55: 1) inokoka vashanyi kuti vatange rwendo rwekutsvaga. Iyi yakajeka replica yendege yese uye nezvivakwa zvayo mazana mana-zvisirizvo zvinogona kuongororwa nekudyidzana uchishandisa iPad. Vanopfuura makumi masere emadhijitari emadhivhi anounza hupfumi hwemashoko anonakidza muchimiro chemanyoro, mavhidhiyo uye mifananidzo ye750D. "Mahwindo akachenjera" anoshandisa chaiyo chaiyo kuti awedzere iyo apuroni panorama ine chaiyo-nguva data pane yakamira ndege. Dzinonakidza nyaya nezve zeppelins neBerlin Airlift inogona zvakare kunakidzwa parwendo rwekudzoka munguva.
"Iyo Globe", hombe yekudyidzana LED madziro ane makumi maviri nemasere ekuongorora masikirini, anoona ese anoenderera nendege pakati peRA nedzimwe nzvimbo pasi rese munguva chaiyo. Iyo inzira inoyemurika yekuona iyo hombe webhu yekubatana kwepasirese uye kuomarara kwekunze kwendege.
Nzendo dzakakurumbira dzendege dzichazotangazve kutanga kwaNyamavhuvhu. Iyo Starter Tour inotora maminetsi makumi mashanu nemashanu uye inosanganisira yekurarama kurondedzera kupa inonakidza rukova rwehuwandu, dhata uye chokwadi panhandare yendege nemabasa ayo. Iyo 45-miniti XXL Yekushanya inopa yakatarisa yakatarisa kumashure kwezviitiko. Vashanyi vanosvika pakuona mashandiro epasi, kutora uye kumhara pavanenge vachipfuura padyo nendege, uyezve vanoona zviteshi zvitsva zvemoto nhamba 120 uye chirongwa chekuvaka kuvaka Terminal 1 nyowani kumaodzanyemba kwendege.
Nzira yakakwana yekutenderedza mafambiro kuenda kunhandare yendege kunakidzwa nemaonero kubva kune yakakurumbira Vashanyi 'Terrace. Iyi chikuva paTerminal 2 inopa shiri-yeziso kuona kwendege kubva kutenderera pasirese kumhara uye kusimuka uye chiitiko chinomhanyisa pane yendege epuroni. Kupemberera kuvhurwa kwayo, kubvuma hakubhadharwe kwenguva yakati rebei - kutora huwandu hwevashanyi panguva ipi neipi, zvisinei, zvakakosha kuti uchengetedze nguva yakatarwa.
Kugadziriswa kunodiwa kune zvese zvivakwa uye kunogona kuitwa muchitoro chetikiti pa www.fra-tourpackages.com. Nehurombo, hazvisati zvichikwanisika kuzviita pane saiti. Munguva yezororo rechikoro chezhizha mudunhu reGerman reHesse, vashanyi veVashanyi Center vanogona kupaka mahara munzvimbo dzeFRA dzekupaka ruzhinji: ingo tora tikiti kana uchityaira mukati woiwana yakasimbiswa pamusuwo weVashanyi Center. Zvakare kune vafambi vezuva, Frankfurt Airport inogara iri nzvimbo yakakosha - zvakasikwa uchitevedzera nemitemo yazvino yekudzivirira hutachiona.
Zvakakosha kuziva: seVashanyi 'Teru, iyo multimedia Fraport Visitor Center inogona zvakare kuverengerwa kubata zviitiko zvemarudzi ese.